Bridges, trano tsy mahazatra sy maro loko, fofona pizza sy Aperol, ataovy Venise a toerana nofinofy ho an'ny fahatapahan'ny tanàna any Eropa. Ny habe keliny, tranombakoka, ary ny fahitana dia hitazona anao foana mandritra ny faran'ny herinandro fohy sy fohy. Misy foana ny piazza kely manodidina ny zorony, aiza no hipetrahanao any aoriana?, manana cappuccino sy panini, na mitondra ny tenanao amin'ny pizza nandoro teo amin'ny fatana tranainy.
Raha manana nify mamy, tena hanana fialan-tsasatra mahafinaritra amin'ny tanàna ianao any Brussels. Brussels dia manana be dia be ny fizarana sy hampisehoana anao, toy ny kanto indrindra sôkôla malaza eran-tany sy waffles. Ankoatry ny, mihoatra ny 100 tranom-bakoka miandry anao ao Brussels. Rehefa avy mitsidika ireo izay tsara indrindra ianao dia afaka mijoroa Danseart hisakafo hohanina amin'ny trano fisakafoanana tsara indrindra. Vatosoa iray hafa any Brussels no mahavariana an'i Sainte-Catherine ary sipa sy kolontsaina an'i Chatelain.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra tokony hatao ao Budapest dia ny mandray sambo mandeha amin'ny renirano Danube. Ny fomba tsara indrindra hankasitrahana ny tanàna sy ny maritrano amin'ny Budapest dia ao anaty sambo. Miaraka amin'ny hetsika ivelany sy anatiny, ny renivohitra Hongria dia manana mari-pahaizana avo indrindra 10 fihenam-bidy tsara indrindra any Eoropa.
eto amin'ny Save A Train, dia ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiaran-dalamby mora indrindra ho any amin'izay rehetra fitsangatsanganana tanàna tsara tarehy izay kasainao hoentina!
Te-hampiditra am-peo bilaogy “10 City Best Breaks any Europe” ve ianao?? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-city-breaks-europe/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / de na / en sy ny maro hafa fiteny.